Bannaanbax lagu dalbanaayo caddaalad u raadinta Ikraan oo ka dhacay Gaalkacyo | KEYDMEDIA ONLINE
Bannaanbax lagu dalbanaayo caddaalad u raadinta Ikraan oo ka dhacay Gaalkacyo
Waxay ku dhawaaqayeen Ikraan caddaalad bay rabtaa, iyo hadallo guubaabo ah oo lagu garab istaagayo Rooble oo ku aadan dardar gelinta howlaha caddaaladda loogu baadi goobayo Ikraan Tahliil oo aheyd gabar da’ yar ah oo qarankeeda u shaqeyneysay.
GAALKACYO, Soomaaliya- Koonfurta magaalada Gaalkacyo qeybta Galmudug waxaa ka dhacay bannaanbax lagu taageerayo caddaalad u raadinta Ikraan Tahliil oo uu hormuud ka yahay Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Boqolaal shacab ah oo ka qeyb galay dibadbaxa ayaa madaxa kusoo xirtay maryo gaduudan, iyagoo watay boorar ay ku kala xardhan yihiin sawirrada Ikraan Tahliil iyo Ra’iisul Wasaare Rooble.
‘‘Ra’iisul Wasaare waxaan kugu garabtaagannahay badbaadinta dalka, jiheynta doorashooyinka iyo caddaalad u raadinta Ikraan’’ ayaa sidoo kale ka mid ahaa waxyaabihii ay ku dhawaaqayeen.
Rooble ayaa dhawaan isku howlay Kiiska Ikraan ee caddaaladda loogu raadinaayo, taasi oo ay bogaadiyeen bulshada qeybaheeda kala duwan. Halka Farmaajo uusan damqasho iyo masuuliyad uusan ka muujin Kiiska Ikraan oo caddeyn u noqotay in la barto wajiga dhabt ah ee Farmaajo, Madama eedeysanayaasha Kiiska Ikraan uu gaashaan u noqday.